Murume oendesa mabhurugwa amadhamu kun’anga | Kwayedza
Murume oendesa mabhurugwa amadhamu kun’anga
26 Jun, 2018 - 07:06	 2018-06-26T07:09:34+00:00 2018-06-26T07:07:24+00:00 0 Views
(Photo © Sipho Futshane / PictureNET Africa)
PANE madzimai maviri anga akaroorwa pabarika ayo ari kupomera murume wavo kuti akatora zvipfeko zvavo zvemukati, ndokuenda nazvo kun’anga yechiMalawi yemuHarare uko zvakanogadzirwa nemishonga achiitira kuti “vakwangaye” kana kufa.
Nhamo yavapo ndeyekuti n’anga yakasota mabhurugwa aya yakafa isati yavaroyonora. Mumwe makumbo ake ava kungozvimba. Uku kuroyiwa neakafa chaiko.
Nyaya izere muKwayedza rinobuda nemusi weChina.